တပ်မတော်ထောက်ခံသူများကို လ က် န က် ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပြုရန် အာဏာ သိ မ်း စစ်ကောင်စီ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် တောင်းဆို – Shwe Thadin
တပ်မတော်ထောက်ခံသူများကို လ က် န က် ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပြုရန် အာဏာ သိ မ်း စစ်ကောင်စီ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် တောင်းဆို
အမျိုး သမီးတစ်ဦးက တောင်းဆိုလိုက်သည်။အခုကျွန် မတို့ မိမိကိုယ်ကို မိမိ ခု ခံ ပိုင်ခွင့်အရ လ က်န က်ပေးကိုင်ခွင့် ရ၊ မရကို ကျွန်မတို့သိချင်ပါတယ်။အရေး တကြီး ဟု မည်သည့်သတင်းဌာနမှဖြစ်သည်ကို ဖေါ်ပြမိတ်ဆက်ခြင်းမပြုဘဲ စစ်တပ်ထောက်ခံသူဟုသာ…
မိတ်ဆက်သည့် အမျိုးသမီးက ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းကို မေးမြန်းသည်။စစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းပြီးနောက် စစ်တပ်ထောက်ခံသူများ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်များနှင့် အမျိုးသားရေးတက်ကြွသူများမှာ ပ စ် မှ တ်ထား တို က် ခို က်မှုကိုခံနေရပြီး မိမိတို့ထောက်ခံနေသည့်….
စစ်တပ်ကလည်း လုံခြုံရေးအာမခံချက်မပေးနိုင်သည့်အနေအထားဖြစ်နေ၍ စစ်တပ်ထောက်ခံသူများအား လ က် န က် တရားဝင်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပေးရန် အရေး တကြီးဟု အဆိုပါ အမျိုးသမီးက တောင်းဆိုမေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အဆိုပါ မေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍….
သတင်းဌာနအမည်နှင့် မေးမြန်းသူအမည်ကို မိတ်ဆက်မေးမြန်းကြခြင်းဖြစ်သော်လည်း အဆိုပါ အမျိုးသမီးက တပ်မတော်ကိုချစ်မြတ်နိုးသူဟုဖေါ်ပြမိတ်ဆက်မေးမြန်းသွားသည်ကိုသာ တွေ့ရပြီး အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ တာဝန်ရှိသူကလည်း ပြန်လည်ဖြေကြားသွားသည်ကို တွေ့ရသည်။…
ထွက်ပြေးလာတဲ့တပ်မတော်သားတစ်ချို့ရဲ့ ထင်မှတ်မထားတဲ့အပြုအမူကြောင့် ဝမ်းနည်းဝမ်းသာဖြစ်ရကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ မင်းတပ် CDF ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး